केवलeयूरोका लागि इबीसामा उड्नुहोस् - यस प्रस्तावलाई सम्झनुहोस्! | यात्रा समाचार
सुसाना Godoy | | ibiza, बोलपत्र
केवलeयूरोको लागि इबीसामा उडान गर्नुहोस्, यो एकदम योजना हो। किनकि यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामी पर्याप्त प्रभावशाली प्रस्तावहरू भेट्टाउन सक्छौं, तर सायद यो उनीहरूको भन्दा बढि छ। एउटा अवस्थित मूल्यको लागि राउन्डट्रिप उडान ती एक पर्यटन स्थलहरू जहाँ उनीहरू अवस्थित छन्।
त्यो हो, यो इबीजा टापु यसले हामीलाई दुबै पक्ष र पार्टीहरू र धेरै अन्य चासोका ठाउँहरू छोड्दछ। यदि तपाईंले उनलाई अहिलेसम्म भेटाउनु भएको छैन भने, यो उत्तम अवसर हो। अझै सेप्टेम्बर र अक्टुबरको अन्त्यमा, तपाईं सबैभन्दा रमाइलो तापक्रमको मजा लिन सक्नुहुन्छ। जे भए पनि तपाई जहाँ हेर्नुहुन्छ, यो उत्तम यात्रा हो!
1 Ibiza को लागि राउन्ड ट्रिप उडान
2 म इबिजामा कहाँ बस्छु?
3 Ibiza मा के हेर्ने
3.1 Dalt Vila मा जानुहोस्
3.2 यो भेद्रे हो
3.3 मारिया गुफा बनाउन सक्नुहुन्छ
3.4 सान्ता Eulalia को चर्च
3.5 सूर्यास्तको आनन्द लिनुहोस्
Ibiza को लागि राउन्ड ट्रिप उडान
उडान म्याड्रिडबाट प्रस्थान गर्छ। केहि सामान्य कुरा जब यो यस्तो प्रस्तावहरू आउँदछ, जुन सामान्यतया म्याड्रिड वा बार्सिलोना एयरपोर्टहरूबाट छोडिन्छ। अझै, हामी एकको सामना गरिरहेका छौं trip यूरो को लागी राउन्ड ट्रिप टिकट। साथै, हामीसँग छनौट गर्न विकल्पहरू छन्। त्यो प्रस्थान धेरै बिहान वा दिउँसो हुन सक्छ। जबकि फिर्ती समय मा एक मात्र विकल्प हुनेछ।
तपाईं Ryanair कम्पनी संग उडान हुनेछ। यदि तपाईं अन्य कम्पनीहरूमा अप्ट इन गर्न रुचाउनुहुन्छ भने, तपाईंसँग अफरहरू पनि उपलब्ध छन् जुन तपाईं लगभगeयूरो बढी महँगो पाउन सक्नुहुन्छ। हामी यस यात्रालाई कायम राख्न जाँदैछौं जहाँबाट हामी सेप्टेम्बर on० मा प्रस्थान गर्नेछौं र फिर्ता अक्टुबर will मा हुनेछ। त्यसो भए यसले हामीलाई Ibiza जस्तो स्थानको आनन्द लिन समय दिनेछ। तिमि तयार छाै?। ठिक छ, तपाईं अब मा आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ eDreams.
म इबिजामा कहाँ बस्छु?
अवश्य पनि, विकल्पहरू सबै भन्दा धेरै हुन्। तर टिकटले हामीलाई के खर्च गर्दछ भनेर हेरेर हामी यसलाई आवासमा अती बढी गर्न चाहँदैनौं। तसर्थ, हामीले केहि अपार्टमेन्टहरू चयन गरेका छौं। किनकि यो सँधै आरामदायक हुन्छ, यदि हामी बढि व्यक्तिहरूसँग जान्छौं भने। यस अवस्थामा, लिडो अपार्टमेन्टले हामीलाई मूल्य दिन्छ Five n रातको लागि 3785यूरो र दुई व्यक्तिको लागि। उनीहरूसँग आधारभूत भान्साकोठा छ र इबिसाको महलको नजिक छ। तिनीहरूलाई बुक गर्नुहोस् Hotels.com.
हामीसँग धेरै दिनहरू छन् Ibiza भ्रमण गर्नुहोस्त्यसो भए हामीले समयको बारेमा चिन्ता लिनु हुँदैन। उत्तम कुरा भनेको संगठित हुनु हो र हामी बिदाको आनन्द लिने छौं। तर अझै, हामी तपाईंलाई केही आवश्यक साइटहरूको साथ छोड्छौं जुन तपाईंले हेर्नु वा गर्नुपर्दछ। किनकि पार्टी र समुद्री किनारका अतिरिक्त, त्यहाँ उपयुक्त विकल्पहरू पनि छन् जुन तपाईले पर्खिरहनु भएको थियो।
Dalt Vila मा जानुहोस्
निस्सन्देह, यो ध्यानमा राख्नको लागि एक बिन्दु हो। यो बारे मा छ ऐतिहासिक क्षेत्र को माथिल्लो भाग। यसको पुराना पर्खालहरू छन्, जुन यस शहरलाई तुर्कीहरूको आक्रमणबाट जोगाउनका लागि निर्माण गरिएको थियो। त्यहाँ तपाईं रोमन ब्रिज, ड्राब्रिज र यसको मुख्य गेटहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
हामीसँग केहि दिनहरू भएको छ, हामी यस टापुको भ्रमण पनि गर्न सक्छौं, यो भेद्रे हो। यो Ibiza नजिक छ, एक परिपूर्ण क्षेत्रमा जुन दृष्टिकोणमा टु .्गिन्छ। यसबाट, विचारहरू आश्चर्यजनक छन्, तर केवल त्यो मात्र होइन, तर उनीहरू शान्ति उत्पन्न गर्छन्। त्यसोभए यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन यदि तपाईं हिंड्ने वा ठाउँहरू भ्रमण नगरी थकित हुनुहुन्छ भने, यो प्रतिबिम्बित गर्ने राम्रो बिंदु हो।
मारिया गुफा बनाउन सक्नुहुन्छ
तपाईं नगरपालिका मा गुफा पाउनुहुनेछ, सन्त मिकेलटापुको उत्तर मात्रै हो। यो एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक हो। किनभने यो धेरै वर्ष पुरानो पनि छ। यो तस्करहरु द्वारा बसोबास गरेको थियो, तर आज, यो गन्तव्यहरु को अर्को हो जुन तपाईले आफ्नो यात्रामा याद गर्न सक्नुहुन्न।
सान्ता Eulalia को चर्च
यस टापुको अर्को सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो सान्ता Eulalia देस रयू। त्यहाँ तपाईं सुदृढ चर्चको मजा लिन सक्नुहुन्छ। अर्को स्थान जहाँ तपाइँ धेरै रहस्यहरु पाउनुहुनेछ र त्यो पनि निराश हुँदैन।
सूर्यास्तको आनन्द लिनुहोस्
तपाईं सुन्दर सूर्यास्त मिस गर्न सक्नुहुन्न। यसका लागि तपाईसँग धेरै कुनाहरू छन् तपाईको डिस्पोजेसनमा र ती मध्ये एउटा खाडी हुन सक्छ सन्त अन्टोनी डे Portmany। यो ज्ञात छ किनकि सबैले पुष्टि गर्दछ कि यो एक पोइन्ट हो जहाँ सूर्यास्तहरू धेरै रमाइलो हुन्छन्। हामीले शंकाहरू छाड्नुपर्नेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » केवलeयूरोको लागि इबीसामा उडान गर्नुहोस्